၇။ မပျင်းနိုင်ပေါင် တစ်နေကုန်အလုပ်တွေများ…… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ၇။ မပျင်းနိုင်ပေါင် တစ်နေကုန်အလုပ်တွေများ……	6
၇။ မပျင်းနိုင်ပေါင် တစ်နေကုန်အလုပ်တွေများ……
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 22, 2015 in Creative Writing, My Dear Diary |6comments
” ခြေတစ်လှမ်း အကွာက သူတို့နေရာ “(အပိုင်း ၇)
ကျယ်ခေါင်မှာ အလုပ် လုပ်ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ အမျုိးသမီး အင်အားစုက ပိုများမယ်ထင်ပါတယ်။
နန်းတော်ပေါက် က နေ၀င်လာရင် ပထမဆုံးစတွေ့ရမှာက
အဲဒီကနေ နည်းနည်းလေးဆက်သွားလို့ အလံတိုင်လွန်ရင်
လူနင်းတဲ့ဆိုက်တွဲတွေ တန်းစီထားတဲ့အပေါ်မှာ ဆိုက်တွဲနင်းတဲ့အမျုိးသမီးတွေ
ဇာပန်းထိုးရင်း ဖုန်းနဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲ ကြည့်နေရင်း စီးမယ့်သူကိုစောင့်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်။
တို့ဟူးနွေး၊ရာသီပေါ်အသီးအနှံ၊ပေါက်စီ စ တဲ့အစားအသောက်တွေပေါ့။
ဒီလိုလှည့်ရောင်းတာကတော့ ရှမ်း နဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေများပါတယ်။
ထော်လာဂျီမောင်းပြီး မူဆယ်နဲ့ကျယ်ခေါင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးလုပ်နေတဲ့
ကျယ်ခေါ်င်မြို့ရဲ့လူအစည်ဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ ၄လမ်းနားက ဆိုင်ကယ်အရောင်း
အ၀ယ်လုပ်တဲ့နားမှာဆိုရင်လဲ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆင်းဘို့ တာဝန်ခံပြီး
ကျယ်ခေါင်မြို့တောင်ဘက်က ဈေးထဲမှာ အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေကြတာကလဲ
ကျောက်ဝိုင်းနားမှာ ကားရပ်နားခ ကောက်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်နေတာလဲအမျုိးသမီးတွေပါဘဲ။
ကျနော်မြင်တွေ့ရသလောက် တရုပ်ပြည်မှာ အမျုိးသမီးတွေက ယောကျာ်းတွေနဲ့
တန်းတူ အလုပ် လုပ်တာကိုမြင်နေရပါတယ်။
ရွှေလီတံတား အလွန် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဂိတ်ကိုလွန်လို့ မြို့ထဲဘက်
အ၀င်လမ်းဘေးမှာ အသီးအနှံသည်တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဖရဲသီး သခွားသီး တွေကို ကားပေါ်တင်ပြီး လမ်းဘေးမှာထိုင်ရောင်းကြတာပါ။
ဖရဲသီးတစ်လုံးကို တရုပ်ငွေ (၈)ယွမ် လို့ ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတွေရေးပြီးရောင်းကြတာပါ။
လိမ္မော်သီး တွေဆိုရင်လဲ ကား တစ်စီး လုံးအပြည့်တင်ပြီး ရောင်းတာပါ။
ခွေးရောင်းတဲ့သူ ကလေးကစားစရာရောင်းတဲ့လူ တွေကလဲ ရွှေလီမြို့အ၀င်လမ်းနံဘေး
အဲလိုရောင်းတဲ့ဈေးသည်တွေကို လာရစ်သူ ပြဿနာရှာသူ မရှိလို့လဲ
နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာ အခြေခံလူတန်းစားတွေ အေးချမ်းစွာ နဲ့ လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ခွင့်ရှိဘို့
အထူးလိုအပ်သလို အခြေခံလူတန်းစားဘက်ကလဲ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့နေထိုင်စား
စက်ဘီး ဒါမှမဟုတ် ဆိုက်တွဲတစ်စင်းနဲ့ အမိူက်ပုံတကာလည်ပြီးအမိူက်ကောက်
ကျနော်နေတဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အမိူက်ခြင်း တစ်လုံးချထားပါတယ်။
အမိူက်သိမ်းသူက က နေ့စဉ်လာပြီးအချိန်မှန်မှန်သိမ်းသွားပါတယ်။
လကုန်ရင်တော့ အမိူက်သိမ်းခ လာကောက်ပါတယ်။
တစ်လ ယွမ် ၅၀။
၀တ်စားထား တာသပ်သပ်ရပ်ရပ် ဒေါက်မြင့် ဖိနပ်နဲ့၊
ကျနော်တို့ဆီမှာ အမိူက်သိမ်းတဲ့အလုပ် လုပ်သူဆိုရင် အနိမ့်စားလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
သူတို့ ဒီလို အမိူက်သိမ်းတဲ့အလုပ် ကို လုပ်နေပေမယ့်
အလုပ်ဟူသမျှ ဂုဏ်ရှိစွ လို့သတ်မှတ်ပြီး လုပ်တယ်ဆိုတာ
ကျနော်တို့ဆီမှာတော့ ဒီလို စကားတွေက စာအုပ်ထဲမှာနဲ့
ဒီမှာတော့ မယ်သီလရှင်လေးတွေဆန်ခံထွက်တဲ့ရက်က အဖိတ်ဥပုဒ်မဟုတ်ဘဲ
ဆေးစွဲနေတယ်လို့သူများပြောလို့ သိရတဲ့ အသက် ၁၅-၁၆နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်၊
စိတ်သိပ်မနှံ့တဲ့ အရပ်မြင့်မြင့်တစ်ယောက် ကတော့လမ်းလျောက်တောင်းတာကိုမြင်နေရပြီး
ဒါပေမယ့် ကျယ်ခေါင်မြို့ရဲ့ နေရာအတော်များများက ဂိုဒေါင်တွေဖြစ်နေတာကို
ကျယ်ခေါင်မြို့ ကို လှည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်……….
မြစပဲရိုး says: မိန်းမဦးရေများလာတာလဲ ပါမှာပါ။ နေရာတိုင်း အလုပ်တိုင်းမှာ ကျား/မ ခွဲ လို့ မရ အောင် ကို ကျား တွေ ရှားလာရင် ဒွတ်ခ။ (ခွက်ဒစ် – မွသဲ) lol:-)))
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လေဒီဖတ်စ် ဆိုပြီး မိန်းမတွေကို အလုပ်လုပ် ခိုင်း
ယောက်ျားတွေ က နှပ်နေတာနေမှာ
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပျက်သွားတဲ့ပုံတွေ အသစ်ပြန်တင်ပေးထားပါတယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .လေးပေါက်စာတွေ ဗဟုသုတ များတယ်။ ကျယ်ခေါင်မှာတောင် သွားနေချင်ပြီ။ ရာသီဥတုလည်း ကောင်းမယ် ထင်တယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ရာသီဥတုကတော့ သစ်ပင်တွေ စိမ်းစိမ်းစိုစိုရှိလို့
ကျနော်က မြင်သမျှလေးတွေကို ပါးပါးလေးဘဲရေးပြတော့ သိပ်တော့လဲ ဗဟုသုတများတယ်မဆိုနိုင်ပါဘူး
Ma Ma says: ကျယ်ခေါင်မြင်ကွင်းကို ကိုယ်တိုင်လိုက်ကြည့်ရင်တောင် ဒါလောက်မစုံနိုင်ဘူး။
နေရာဒေသတစ်ခုမှာ အကြာကြီးနေပြီး ဓလေ့ထုံးစံတွေ အလေ့အထတွေကို သိရတာမျိုး သဘောကျတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.